Homemade sushi by Dr Honey – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Homemade sushi by Dr Honey
Dr Honey ၏ ဆူရှီလုပျနညျး
ဆူရှီဆိုတာ ဂပြနျအစားအစာတဈမြိုး ဖွဈတယျဆိုတာ လူတိုငျး သိကွပမေယျ့ စာရေးသူရဲ့ favorite အစားအစာတဈခုဖွဈတယျဆိုတာတော့ လူတိုငျး သိမယျ မထငျပါဘူး။ ???
ဆူရှီကို ကွိုကျလှနျးတော့ အိမျမှာ ခဏ ခဏ လုပျစားဖွဈတယျ။ အာဟာရဆရာဝနျတဈယောကျအနနေဲ့ အာဟာရရှုထောငျ့က ကွညျ့ရငျလညျး ဆူရှီကို အာဟာရ မှနျကနျမြှတစှာ ပါဝငျတဲ့ အစားအစာတဈခုလို့ မွငျမိတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီတဈပတျမှာ စာရေးသူရဲ့ homemade sushi (more nutritious version) ပွုလုပျနညျးလေးနဲ့ ဆူရှီနဲ့ ပတျသကျပွီး အာဟာရဆိုငျရာ ကောငျးကြိုးတှေ၊ သတိပွုလိုကျနာစရာလေးတှကေို ပွောပွပေးခငျြပါတယျ။
“Dr Honey’s Homemade Sushi (more nutritious version)”
ဆူရှီမှာ main ingredient က ထမငျးပါ။ Vinegared rice လို့ ချေါပါတယျ။ ထမငျးကို vinegar အနညျးငယျ၊ ဆား၊ သကွားအနညျးငယျနဲ့ နယျပွီး အသား၊ အရှကျတှနေဲ့ ရညှေိထဲ ထညျ့လိပျတာပါ။ ဒီနရောမှာ စာရေးသူက ပျေါဆနျးမှေးတို့၊ ရှမျးဆနျတို့ကို မသုံးဘဲ ဆနျလုံးညိုကို သုံးပါတယျ။ ဆနျလုံးညိုရဲ့ ကောငျးကြိုးတှကေတော့ သနျ့စငျထားတဲ့ဆနျတှထေကျ အာဟာရတနျဖိုး မွငျ့မားတယျ၊ glycemic index လို့ ချေါတဲ့ အစားအစာတဈခုရဲ့ သှေးတှငျးသကွားဓါတျကို မွငျ့တကျစမှေု အတိုငျးအတာက နညျးလို့ ဆီးခြိုသမားတှအေတှကျ ပိုအဆငျပွစေတေယျ၊ နောကျပွီး insoluble fiber လို့ ချေါတဲ့ သှေးထဲမှာ ပြျောဝငျနိုငျတဲ့ အမြှငျဓါတျတှေ ပါဝငျတာကွောငျ့ သှေးတှငျးကိုလကျစထရောကို ကစြပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဆနျလုံးညိုလေးကိုခကျြ၊ ပူပူနှေးနှေးလေးကို vinegar နညျးနညျး၊ ဆားနညျးနညျး (တကယျ့ကို အရသာပါရုံ နညျးနညျး) နဲ့ နှမျးအနညျးငယျထညျ့ပွီး နယျပါတယျ။
ပွီးရငျ အသားအတှကျက တူနာသုံးတယျ၊ ဆီနညျးနညျး၊ ဆားနညျးနညျးနဲ့ ကွျောထားတဲ့ ကွကျဥကွျောသုံးတယျ၊ ပုစှနျသုံးတယျ၊ ဆယျမှနျငါးသုံးပါတယျ။ လတျဆတျတဲ့ သဘာဝအသားငါးတှကေိုပဲ အသုံးပွုပွီး ကွကျ/ဝကျသားခြောငျး၊ ကွကျ/ဝကျအူခြောငျး၊ ဂဏနျးခြောငျး စတာတှကေို မသုံးပါဘူး။ အဲ့လို preserved food တှကေ သဘာဝအသားတှထေပျ အဆီဓါတျပိုမြားပွီး၊ ကွာရှညျခံနိုငျဖို့အတှကျ ဆားတှအေမြားကွီး၊ သကွားတှအေမြားကွီး ထညျ့ထားရပါတယျ။ တခြို့ဆိုရငျ အူမကွီးကငျဆာကို ဖွဈစတေဲ့ ယမျးစိမျးတှတေောငျ ပါပါသေးတယျ။
အသီးအရှကျကတော့ နှဈသကျရာ အကုနျထညျ့ပါတယျ။ ပွီးရငျ ဝါးလိပျလေးပျေါ ရညှေိလေးတငျ၊ ထမငျးလေးထညျ့၊ အစာပလာလေးတှစေီပွီးလိပျ၊ ပေါငျးအိုးထဲ ထညျ့ပွီး ခဏ အပူပေးပွီးတဲ့နောကျ အရှယျတျော အတုံးလေးတှေ တုနျးပွီး ဘာမရိုးနဈ့၊ ဘာပဲငံပွာရညျမှ မပါဘဲ စားပါတယျ။ မရိုးနိဈ့မစားတာကတော့ မလိုအပျတဲ့ ကယျလိုရီ အပိုတှေ တကျမှာစိုးလို့ပါ။ ပဲငံပွာရညျမစားတာကတော့ နဂိုထဲက မကွိုကျတာရယျ၊ ဆိုဒီယမျပမာဏကို လြှော့ခခြငျြတာရယျကွောငျ့ပါ။
အရသာရှိပွီး အာဟာရတနျဖိုး မြှတကောငျးမှနျတာကွောငျ့ ဆိုငျမှာလညျး ခဏခဏ သှားစားဖွဈသလို၊ လုပျရတာလှယျတဲ့အတှကျ အိမျမှာလညျး အပျေါကပွောသလို အာဟာရပိုရှိအောငျ၊ ကနျြးမာရေးနဲ့ ပိုညီညှတျအောငျ modify လုပျပွီး စားဖွဈပါတယျ။
My Doctor ရဲ့ ပရိသတျတှထေဲက ဆူရှီကွိုကျတဲ့သူတှကေို Dr Honey ရဲ့ modified version လေးကို ပွောပွရငျး အားလုံး သကျရှညျကနျြးမာ စိတျခမျြးသာကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျရပါတယျရှငျ။
M.Sc Nutrition & Dietetic (UK)
Dr Honey ၏ ဆူရှီလုပ်နည်း
ဆူရှီဆိုတာ ဂျပန်အစားအစာတစ်မျိုး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိကြပေမယ့် စာရေးသူရဲ့ favorite အစားအစာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ လူတိုင်း သိမယ် မထင်ပါဘူး။ ???
ဆူရှီကို ကြိုက်လွန်းတော့ အိမ်မှာ ခဏ ခဏ လုပ်စားဖြစ်တယ်။ အာဟာရဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အာဟာရရှုထောင့်က ကြည့်ရင်လည်း ဆူရှီကို အာဟာရ မှန်ကန်မျှတစွာ ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတစ်ခုလို့ မြင်မိတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီတစ်ပတ်မှာ စာရေးသူရဲ့ homemade sushi (more nutritious version) ပြုလုပ်နည်းလေးနဲ့ ဆူရှီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာဟာရဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးတွေ၊ သတိပြုလိုက်နာစရာလေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဆူရှီမှာ main ingredient က ထမင်းပါ။ Vinegared rice လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ထမင်းကို vinegar အနည်းငယ်၊ ဆား၊ သကြားအနည်းငယ်နဲ့ နယ်ပြီး အသား၊ အရွက်တွေနဲ့ ရေညှိထဲ ထည့်လိပ်တာပါ။ ဒီနေရာမှာ စာရေးသူက ပေါ်ဆန်းမွှေးတို့၊ ရှမ်းဆန်တို့ကို မသုံးဘဲ ဆန်လုံးညိုကို သုံးပါတယ်။ ဆန်လုံးညိုရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကတော့ သန့်စင်ထားတဲ့ဆန်တွေထက် အာဟာရတန်ဖိုး မြင့်မားတယ်၊ glycemic index လို့ ခေါ်တဲ့ အစားအစာတစ်ခုရဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို မြင့်တက်စေမှု အတိုင်းအတာက နည်းလို့ ဆီးချိုသမားတွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေစေတယ်၊ နောက်ပြီး insoluble fiber လို့ ခေါ်တဲ့ သွေးထဲမှာ ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ အမျှင်ဓါတ်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကို ကျစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆန်လုံးညိုလေးကိုချက်၊ ပူပူနွေးနွေးလေးကို vinegar နည်းနည်း၊ ဆားနည်းနည်း (တကယ့်ကို အရသာပါရုံ နည်းနည်း) နဲ့ နှမ်းအနည်းငယ်ထည့်ပြီး နယ်ပါတယ်။
ပြီးရင် အသားအတွက်က တူနာသုံးတယ်၊ ဆီနည်းနည်း၊ ဆားနည်းနည်းနဲ့ ကြော်ထားတဲ့ ကြက်ဥကြော်သုံးတယ်၊ ပုစွန်သုံးတယ်၊ ဆယ်မွန်ငါးသုံးပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ သဘာဝအသားငါးတွေကိုပဲ အသုံးပြုပြီး ကြက်/ဝက်သားချောင်း၊ ကြက်/ဝက်အူချောင်း၊ ဂဏန်းချောင်း စတာတွေကို မသုံးပါဘူး။ အဲ့လို preserved food တွေက သဘာဝအသားတွေထပ် အဆီဓါတ်ပိုများပြီး၊ ကြာရှည်ခံနိုင်ဖို့အတွက် ဆားတွေအများကြီး၊ သကြားတွေအများကြီး ထည့်ထားရပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် အူမကြီးကင်ဆာကို ဖြစ်စေတဲ့ ယမ်းစိမ်းတွေတောင် ပါပါသေးတယ်။
အသီးအရွက်ကတော့ နှစ်သက်ရာ အကုန်ထည့်ပါတယ်။ ပြီးရင် ဝါးလိပ်လေးပေါ် ရေညှိလေးတင်၊ ထမင်းလေးထည့်၊ အစာပလာလေးတွေစီပြီးလိပ်၊ ပေါင်းအိုးထဲ ထည့်ပြီး ခဏ အပူပေးပြီးတဲ့နောက် အရွယ်တော် အတုံးလေးတွေ တုန်းပြီး ဘာမရိုးနစ့်၊ ဘာပဲငံပြာရည်မှ မပါဘဲ စားပါတယ်။ မရိုးနိစ့်မစားတာကတော့ မလိုအပ်တဲ့ ကယ်လိုရီ အပိုတွေ တက်မှာစိုးလို့ပါ။ ပဲငံပြာရည်မစားတာကတော့ နဂိုထဲက မကြိုက်တာရယ်၊ ဆိုဒီယမ်ပမာဏကို လျှော့ချချင်တာရယ်ကြောင့်ပါ။
အရသာရှိပြီး အာဟာရတန်ဖိုး မျှတကောင်းမွန်တာကြောင့် ဆိုင်မှာလည်း ခဏခဏ သွားစားဖြစ်သလို၊ လုပ်ရတာလွယ်တဲ့အတွက် အိမ်မှာလည်း အပေါ်ကပြောသလို အာဟာရပိုရှိအောင်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပိုညီညွတ်အောင် modify လုပ်ပြီး စားဖြစ်ပါတယ်။
My Doctor ရဲ့ ပရိသတ်တွေထဲက ဆူရှီကြိုက်တဲ့သူတွေကို Dr Honey ရဲ့ modified version လေးကို ပြောပြရင်း အားလုံး သက်ရှည်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။